स्वाइन फ्लुबाट जाजरकोटमा २३ को मृत्यु, आजै २७ दिनकी बालिकाको ज्यान गयो – YesKathmandu.com
स्वाइन फ्लुबाट जाजरकोटमा २३ को मृत्यु, आजै २७ दिनकी बालिकाको ज्यान गयो
शनिबार ०५, बैशाख २०७२
तीन सातादेखि जाजरकोटमा फैलिएको महामारीबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या दैनिक बढ्दै जान थालेको छ । शनिवार मात्र २७ दिनकी एक बालिकासहित २ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । यो संगै जाजरकोटमा मृत्यू हुनेको संख्या २३ पुगेको छ ।
स्वाइन फ्लुबाट शनिवार नायकबाडा– ८ का ६१ वर्षिय वीरबहादुर कामीको शनिबार बिहान ज्यान गएको छ। यस्तै पजारुमा शुक्रबार साँझ २७ दिनकी बालिका अमृता अधिकारीको पनि मृत्यु भएको जिल्ला जनस्वास्थय कार्यालय जाजरकोटले जनाएको छ ।
सरकारले महामारी नियन्त्रणमा आएको दावी गरेपनि जाजरकोटमा मृत्यू हुनेको संख्या बढ्न थालेको छ । विरामीलाई उपचार गर्ने स्वास्थ्यकर्मी र औषधी अभावले दैनिक जाजरकोट बासीले ज्यान गुमाउन थालेका छन् । भएको औषधी पनि जिल्ला सदरमुकाम खलंगामा मात्र छ । गाउका स्वास्थ चौकीहरु स्वास्थ्यकर्मी र औषधीविहीन भएको छ ।
दैनिक जाजरकोटबासीले औषधी उपचारको अभावमा ज्यान गुमाउन थालेपछि नेपाली सेनाको एक टोली जाजरकोट पुगेको छ । मध्यपश्चिम पृतना सुर्खेतबाट पृतनापतिसहित डाक्टरको टोली प्रभावित क्षेत्रमा पुगेको छ ।
एसिड आक्रमणकारी जीवनले अदालती बयानमै भने ‘सिमा मलाई माफ गर’
आत्मघाती बम हमलामा ३२ जनाको मृत्यु २ सय घाइते
Will need to read this postafew times to ensure I acquired everything.
मेरै कोशिसले तस्करहरु पक्राउ परेका हुन
७५ जिल्लामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिद्वारा घेराउ
डिआइजी नवराज सिलवालको दुई नम्बर कता गायव ?
‘स्क्रब टाइफस’को निःशुल्क परीक्षण सुरु
अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापनका लागि नीतिगत व्यवस्था गरिने : शिक्षामन्त्री पौडेल
माओवादी युद्धमा एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलको बिद्यावारिधी !
सप्तरीका सिडिओ र प्रहरी प्रमुखलाई प्रधानमन्त्रीले काठमाडौं बोलाए